Wargeyska ‘Kicker’ ee Jarmalka oo doortay Xidigga ugu fiican Bundesliga 2016 – Gool FM
Wargeyska ‘Kicker’ ee Jarmalka oo doortay Xidigga ugu fiican Bundesliga 2016
Haaruun August 14, 2016
(Munich) 14 Agoosto 2016 – Wargeyska caanka ah ‘Kicker’ ee ka soo baxda Jarmalka ayaa Daafaca kooxda Bayern Munich Jerome Boateng u doortay xidigga ugu fiican Jarmalka sanadkan 2016 xilli toddobaad ay ka hartay furitaanka Horyaalka Bundesliga-ha Jarmalka dalkaasi.
Abaal-marinnada Wargeyskan ayaa waxay u xiran tahay kooxda Bayern Munich tan iyo sanadkii 2007, markaas oo uu ku guuleystay Ribery, sanadkii 2010 waxaa ku guuleystay Arjen Roben, halka sanadkii 2013 xidiggii ugu fiicnaa uu noqday Schweinsteiger.
Goolhayaha Bayern Manuel Neuer ayaa sanadkii 2011 ku guuleystay waloow xilligaasi uu u dheelayay Schalke, halka 2012 loo doortay Marco Reus oo Dortmund u safta.
Sanadkii 2014 jaa’isada Kicker waxaa helay Goolhaye Neuer, isagoo markan ku ciyaaraya funaanadda Bayern Munich.
Kevi de Bruyne ayaa nasiib u yeeshay xidiggii ugu fiicnaa Jarmalka 2015 ee abaalmarinta Kicker, xilligaas oo uu u ciyaarayay VfL Wolfsburg.
Saxiixa cusub ee kooxda Paris Saint-Germain Jese Rodriguez oo qalliin lagu sameeyey
HOR DHAC: Bournemouth Vs Manchester United